Marxalado Caadi ah oo Caadi ah Ka Dib Faafidda Qulqulka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraMarxalado Caadi ah oo Caadi Ahaan Ka Dib Faafidda Waxaa La Qabtay
talaabooyinka caadiga ah ee kuxiran jadwalka taariikhda
Sida ku xusan 'kalandarka caadiga ah' ee looga hadlay shirkii golaha wasiirrada ee uu guddoominayay Madaxweyne Erdogan; Iiddaas ka dib, "boqol boqolkiiba wax caadi ah" ma dhici doonto, laakiin tartiib tartiib ayaa mamnuucidda loo qaadi doonaa meelaha xiranna la furi doonaa.
Turkey, ka dib markii muddo bil 11 dibna ugu rogto xaaladood oo coronavirus ugu horeysay arkay on 1.5 March qaaday in ajandaha ka dib markii fayraska caadi ah. Waxaa la sheegay in mawduuca ugu muhiimsan ee kulanka golaha wasiirrada ee uu shir guddoominayo Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan uu yahay jadwalka caadiga ah.
Sidaas darteed, 'XNUMX boqolkiiba caadi ahaanta' ma dhici doonto munaasabadda ka dib, laakiin tartiib tartiib ayaa mamnuucidda loo qaadi doonaa meelaha la xirayna waa la furi doonaa.
Hawsha caadiga ah waxay ka koobnaan doontaa 4 marxaladood, iyo marxaladda koowaad, oo loo yaqaan 'xilliga diyaarinta', waxay bilaabmi doontaa inta u dhexeysa 4-26 Meey 2020.
Sida uu sheegayo warka Kıvanç El ee ka socda MilliyetJadwalka kaadhka sharciyeynta ee meela kale waa sida soo socota:
Xarumaha cayaaraha: Waxaa la sheegay in xarumaha ciyaaraha la rajeynayo inay xirnaadaan illaa dhamaadka xagaaga.
Riwaayadaha, tiyaatarka: Riwaayadaha, tiyaatarka iyo dhacdooyinka la midka ah ee ay qabanqaabiyaan dawladaha hoose iyo maamulada degmooyinka looma ogolaan doono bilaha xagaaga.
hotels: Sida ku xusan nidaamka shahaado si loo hirgaliyo markii ugu horeysay aduunka, hoteelada waxaa loo qorsheeyay in si tartiib tartiib ah loo furo iyadoo loo eegayo masaafada bulshada.
Mamnuucida safarka: Waxaa la qorsheeyay in xayiraadda safarka ay sii socon doonto muddo ka dib iiddii, laakiin rukhsadaha ayaa la fududeynayaa.
Dugsiyada: Waxaa la sheegay in iskuulada aan la furi doonin xagaaga.
Masaajidda: Waxaa loo arkaa in Madaxtooyada arrimaha Diinta ay ka shaqeyneyso sidii ay u sameyn laheyd salaadda ciida iyadoo taxaddar la sameynayo, laakiin suurtagal ma ahan in tan la oggolaado marxaladdaan. Waxaa la bartay in Diyanet ay sameysay ballanqaadyo in nusqaamaha lagu ilaalin karo masaajidyada iyo tillaabooyinka lagu qaadi karo jardiinooyinka.
Marxaladaha caadiga ah
Marxaladda 0 (Muddada u diyaargarowga) 4-26 Meey 2020
Marxaladda 1aad: Meey 27-August-31, 2020
Marxaladda 2: 1 Sebtember-31 Disembar 2020
Marxaladda 3: Janaayo 1, 2021 - Taariikhda markii tallaalka la soo saaray oo loo maamulay Covid 19
Wasiirka Turhan wuxuu baaray marxaladaha wax soo saarka ee Mashruuca Tareenka Qaranka ee Korantada
Warbixin la daabacay 'Marxaladihii Furitaanka ee Istanbul'
ScientBB guddiga Sayniska: 'Ha u ogolaato Talaabooyinka Caadiga ah in ay Joogto Munaasabadda'
Duullimaadyada Akçaray ayaa kordhay inta lagu gudajiro Nidaamka Caadiga ah
Waxaa laga furay shil ka dib Pamukova halkaas oo ay 41 qof ku naf waayeen…
Xarunta Tareen-Marmaray Haydarpasa waxay noqon doontaa ereyga ugu dambeeyay ee dadweynaha!
Qodobada aan la garaneyn ee jidka tareenada
Mashruuca marmaray Istanbul
Korinta Turkey sharciga on Xorreynta ee gaadiidka Tareenka ee ...
Rabshado ayaa ku qarxay kadib markii ay ku burburtay Mersin
Dacwad soo oogeyaal ah oo ka dambeysay shilkii gawaarida ee Istanbul (Video)
2019 ka dib mashaariicda mitrooga ee Istanbul! 355,4 km ayaa ka gudbi doona degmooyinkaas (Video)
Ganacsiga Shiinaha ee Ganacsi Loo Diiday Kadib Markii Loo Isticmaalo Tareenka
Masuuliyaadka ku jira YHT waxay bilaabi doonaan ka dib marka la qoondeeyey
Laga soo bilaabo Magaalada caasimadda Eskisehir Ka dib Shilalka Gawaarida Dhibaatada